Maalintii miyirku kaa lumay: maxaa ku saabsan, yaa qoray iyo maxaad u aqrisay | Suugaanta hadda jirta
Maalintii miyirku ka lumay
Encarni Arcoya | | Buugaag
Xigasho: Penguin Chile
Inta lagu gudajiro daahfurka buugga, waxaa jira qaar, mawduuca, daqiiqadda ama taariikhda darteed, guuleysta oo aad u fog. Taasi waa waxa ku dhacay Maalintii Caqli La'aanta Luntay, shirqool in kasta oo marka hore aadan run ahaantii garanaynin meesha la geeyo, hadhow wuxuu kugu dhejinayaa habkaas oo waxa kaliya ee aad rabto ay tahay inaad gaadho dhamaadka si aad u ogaato waa la dhaafay.
Haddii aad rabto Wax ka ogow maalinta miyirku kaa lumay, sida cidda qortay, waxa ku saabsan, astaamahiisa ama haddii buuggu u qalmo, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso wixii aan kuu diyaarinnay.
1 Waa kuma qoraaga Maalintaas miyir qabka ka lumay
2 Waa maxay maalintii uu miyir beelay?
2.1 Calaamadaha Maalinta Caqli La'aanta
3 Buuggu ma mudan yahay in la akhriyo?
4 Ka taxaddar: waxaa jira qayb labaad
Waa kuma qoraaga Maalintaas miyir qabka ka lumay
'Dambiile' Maalintii uu miyirkiisu ka lumay waa mid kale mooyee Javier Castillo. Qoraagan reer Isbaanishka ah ee ka soo jeeda Mijas wuxuu daabacay sheekadiisa koowaad sanadkii 2014. Xaqiiqdii, isagu wuu iskiis u daabacay Si kastaba ha noqotee, daabacayaashu waxay ogaadeen markii ay bilowday inay guuleysato, illaa heer in dhowr ah ay bixiyeen inay daabacaan. Ugu dambeyntiina, wuxuu doortay Suma de Letras waxaana markale la daabacay 2016.
Si ka duwan qorayaasha kale, ee xambaarsan rabitaanka qoraalka oo wax ku soo bartay, Javier Castillo wuxuu ahaa la taliye xagga dhaqaalaha. Waxay ahayd waqtigiisii ​​firaaqada ee uu kashifay hal-abuurkiisa oo uu u keenay buuggaas cusub. Tan iyo markaasna ma joogsan maxaa yeelay waxay 5 buug ku leedahay suuqa, kii ugu dambeeyayna, The Soul Game, laga bilaabo 2021.
Waa maxay maalintii uu miyir beelay?
Iyada oo aan shaaca laga qaadin wax qarsoon, sheekada Maalintii miyir qabka la waayey Waxay ku bilaabataa dil iyo xarig. Yacquub wuxuu umuuqday isagoo qaawan oo xambaarsan madaxa haween madaxa ka go'an. Sida iska cad, booliisku way xiraan oo waxay isku dayaan inay ogaadaan cidda haweenaydan tahay, sababta uu u dilay, meydka meeshuu yaallo, iwm.
Si tan loo sameeyo, waxay u diraan khabiir FBI ah Stella si ay uga hesho macluumaadkaas isaga. Laakiin Yacquub wuxuu go'aansaday inuu uga sheekeeyo sheeko ka weyn, si uu macno ugu yeesho wixii dhacay ... Halkaasna sheekadu waxay ka bilaabmaysaa dhagar, qarsoodi iyo waalli.
Calaamadaha Maalinta Caqli La'aanta
Si ay kuugu cadaato inaad yeelato aragtida astaamaha aad la kulmi doontid Maalinta Caqliga La lumay, halkan waxaan ku taxnaa:
Yacquub Waa dabeecadda ugu horreysa ee aad la kulanto oo aadan hubin inuu waalan yahay, haddii uu miyir qabo ama waxa ku dhacaya ninkaas.
Dr. Jenkins. Dabeecaddan marka hore waxaad u arkeysaa inay tahay mid labaad, laakiin dhab ahaantii isagu muhiim ayuu u yahay sheekada. Isagu waa agaasimaha xarunta dhimirka ee Jacob la dhigey.
Steven. Waalid. Waxaad arki doontaa laba jeer; maaddaama qoraagu ku tusinayo marxalad dabeecad sannado ka hor iyo hadiyad kale. Isaga oo ay weheliyaan, waxaa si dhow isugu dhow leh jilayaal kale: Karen, Amanda iyo Carla.
Stella hyden. FBI-da waxay u diraan inay la hadlaan Jacob oo ay ogaadaan waxa ku kalifay inuu galo dambiga uu galay.
Wax badan kama sii sheegi karno astaamaha maxaa yeelay haddii aan yeelno, waxaan ku dhammaan doonnaa inaan ku siino tilmaamo iyo inaad nuxuriso qaybaha muhiimka ah ee buugga.
Buuggu ma mudan yahay in la akhriyo?
Ka dib wixii aan kuu sheegnay, waxa caadiga ah waa inaad leedahay fikrad ah inuu yahay buugga aad jeceshahay inaad aqriso ama haddii, qorshaha, sheekada ama habka loo sheego dartiis, aysan kugu soo jiidanayn kugu filan. Runta ayaa ah in qaabka sheekada loo sheegaa ay tahay mida marka hore shaki kugu buuxiyo.
Markaad akhriso cutubka koowaad, wax fikrad ah kama lihid waxa dhacay.. Ma garanaysid cidda, sababta, waxa dhacay. Qoraagu wuxuu kaliya ku siinayaa xoogaa istaroog ah Maalintii miyirku ka lumay. Haddii aan intaas ku dareyno in cutubka labaad uu wax ka beddelayo qaabka iyo astaamaha, waxay kaa sii sii deyneysaa sii kala daadasho waxaana laga yaabaa inaad u malaynayso inuusan ahayn buug sahlan oo la akhriyo.
Bogagga oo dhan, waxaad ka heli doontaa laba waqti oo lagu qeexay goor dambe buugga. Dhinac "xaadirka ah" (iyada oo la tixgelinayo sanadka ay ku qoran tahay riwaayaddu ama ay dhigayso) iyo dhinaca kale oo la soo dhaafay (dhawr sano ka hor xilligii halyeeyadaas). Marka hore waa mid aad u deggan, gaar ahaan maxaa yeelay ma caddeynayso inaad ku jirtid xilligan iyo in kale. Markaad horay u taqaanay jilayaasha, cadeyntaasi looma baahna.
Shaki kuma jiro taas sheekada marka hore waxaad moodaa inaysan wax macno ah samaynayn, in kabadan hal jeerna waxaad dareemi kartaa inay caajis tahay, ama aysan jirin wax qalad ah oo ku jira in la sii wado. Laakiin sirta ku hareeraysan jilayaasha ayaa kaa dhigeysa inaadan ka tagi karin; Waxaad jeceshahay inaad ogaato waxa dhaca, sida qoruhu uga baxayo madax xanuunkaas uu jilayaasha u galiyay. Iyo wax aan jeclahay ayaa ah in aakhirku aanu ahayn wax aad filayso. Waxaa jira faahfaahin badan oo aakhirka baxsashada ah, taas oo kaa yaabineysa, waana taas wax fiican. Xitaa haddii aad tahay qof akhrista jecel, waxaad ku heli doontaa qiyaastaada yaabka ee buugga.
Marka, dhankeenna, iyo qaybtayda shakhsiga ah maxaa yeelay waan akhriyay buugga, haa waa, waanu ku talinaynaa. Xitaa haddii aanad qabsan markii hore, sii fursad siinta maxaa yeelay qarsoodiga jira, waa u qalantaa.
Ka taxaddar: waxaa jira qayb labaad
Kahor intaadan ka tegin mawduuca, waa inaan ku ogeysiinno. Maalinta aad lumisay miyir-qabkaagu waa buug si madax-bannaan loo akhrin karo; runti waxay leedahay bilow iyo dhamaad. Si kastaba ha noqotee, bogagga ugu dambeeya qoraaga laftiisu wuxuu qabanayaa “wax” kaa reebaya malab faruuryahaaga oo, haddii muddada aad u heellan tahay akhrinteeda ay ku jillaabatay, geeska dabacsan ee uu ka tagayo ayaa kaa dhigi doonta inaad kan labaad rabto buugga.
Waxay ku saabsan tahay Maalintii jacaylku lumay oo waxay horeyba ugu jirtaa buugaagta buugaagta, sidaa darteed uma baahnid inaad sugtid waqti dheer inta ay soo baxeyso. Dhexdeeda qayb labaad oo sheekada ah ayaa lagu sheegay, iyada oo diiradda la saarayo isla jilayaasha, laakiin lagu darayo in yar oo dheeraad ah oo waliba u muuqata inay tahay heerka labaad.
Maaha inuu yahay buug ay tahay inaad si qasab ah u akhrido, maxaa yeelay xaqiiqda haddii aad ku qanacsan tahay Maalintii uu Sanku Khasaaray, malaha kuma weydiin doono; Laakiin haddii aad ka mid tahay kuwa doonaya inay xalliyaan dhammaystirka qarsoodiga, markaa waan kugula talinaynaa.
Adigana? Ma akhriday buugga ama buugaagta? Maxaad ka fakartay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Maalintii miyirku ka lumay
Rosa Ribas. Wareysi lala yeeshay qoraaga Caruurta Wanaagsan
Infinity ee cawsduur